के तपाइको खुट्टा बाँउडिने, फर्कने गर्छ? गर्छ भने जान्नुहोस् यस्ता समाधानका उपाय – Samabeshi Khabar
के तपाइको खुट्टा बाँउडिने, फर्कने गर्छ? गर्छ भने जान्नुहोस् यस्ता समाधानका उपाय
८ चैत्र २०७७, आईतवार १२:१५ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । महिलाहरुमा धेरैजसो खुट्टा फर्कने समस्या गर्भावस्था वा महिनावारीको समयमा सबैभन्दा बढी हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो के कारण खुट्टा फर्कने वा दुख्ने हुन्छ पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ । यदि गर्भावस्थाका कारण हो भने त्यसैअनुसारको उपाय अनाउनु पर्छ । बच्चालाई हो भने खुट्टाको मालिस गर्नुपर्छ । तर, यदि यस्तो समस्या लामो समयसम्म रहिरहन्छ भने चिकित्सकलाई देखाउनु आवश्यक हु्रन्छ ।
क्याल्सियम, पोटासिय र म्याग्नेसियमले भरिएको भोजन लिने – हड्डि कमजोर भई खुट्टा फर्कने अथवा ऐठान पर्ने समस्या हुन्छ । यदि रातको समयमा खुट्टा फर्कने समस्या छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर भिटामिन–डी, क्याल्सिय, म्याग्नेसियम तथा पोटासियम सप्लिमेन्ट सेवन गर्नुहोस् । यद्यपी, तपाईले यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ ।
तेलले मालिस गनुहोस् – खुट्टा फर्कने वा ऐठान पर्ने समस्याबाट निजात पाउनका लागि तोरी अथाव दौनीको तेलले खुट्टालाई मालिस गर्नुहोस, त्यसपछि कपडाले बेर्नुहोस् । तोरीको तेलमा एसिटीक एसिड हुन्छ, जसले शरीरको कुनै पनि भागमा दुखेको ठाउँमा लगाएर मालिस गरे दुखाई कम हुन्छ ।